Iindaba - Pulse yengubo yengubo yokuqokelela uthuli
HMC series ukubetha ilaphu ingxowa umqokeleli umqokeleli uhlobo olulodwa ingxowa uthuli umqokeleli. Yamkela isikhwama sokucoca setyhula, inkqubo yokungenisa umoya ene-pulse mode yokucoca uthuthu, enezinto ezinokusetyenziswa kokucoca uthuli oluphezulu, ukusebenza kakuhle kokucoca uthuthu, ukumelana nokusebenza okuphantsi, ubomi benkonzo ende yebhegi yokuhluza, ulondolozo olulula kunye nokusebenza okuzinzileyo, njl.
Xa irhasi yothuli ingena kwilaphu lengqokelela uthuli oluqokelelwa ngumoya, ngenxa yokwehla kwesantya somoya, amasuntswana othuli anendawo enkulu yokuhlala kwi-ash hopper, kunye nothuli olukhanyayo luxhomekeke kukungeniswa komoya ukufikelela kumphezulu yengxowa yokususa uthuli. Ingxowa yokuhluza yomqokeleli wothuli ngokubanzi isebenzisa inaliti evakala njengesixhobo sokucoca ulwelo, kunye nokuchaneka kokucoca kungafikelela kwi <1um. Uthuli luvaliwe kumphezulu ngengxowa yecebo lokucoca ulwelo, kwaye igesi yothuli iyahlanjululwa ngengxowa yokuhluza. Ngokunyuka kwexesha, uthuli olucocayo luhluzwa ngaphezulu kwengxowa yecebo lokucoca ulwelo, ngoko ke ukuxhathisa kwengxowa yecebo lokucoca ulwandiso ngokuthe chu. Ukwenzela ukuba umqokeleli wothuli asebenze ngesiqhelo, xa uxhathiso luphakama ukuya kuluhlu olulinganiselweyo, isilawuli sokubetha kombane sikhupha imiyalelo yokulandela iodolo. Ulandelelwano lubangela ivalve yolawulo ngalunye ukuvula ivalve yokubetha, kwaye umoya oxineneyo kwibhegi yokugcina irhasi yomqokeleli wothuli ufafazwa kwisingxobo sokucoca ngokuhambelana nomngxunya wenaliti nganye kumbhobho wenaliti. Isingxobo secebo lokucoca ulwandiso ngokukhawuleza phantsi kwentshukumo yangoko yangoku yokuhamba komoya, eyenza uthuli oluqhotyoshelwe kumphezulu wengxowa yokuhluza iwe kwaye lwenze ukuba ingxowa yeefilitha ifezekise owona mqobo wokuqala wokuvota komoya. Uthuli olucociweyo luwela kwi-ash hopper kwaye luye luphume emzimbeni ngenkqubo yokususa uthuthu ukugqibezela yonke inkqubo yokucoca uthuthu kunye nohluzo.
Uhlobo lweBhegi luQokelele uthuli, Ipholiyesta yePhepha leenaliti-eziQhelekileyo, Isamente Uqokeleli Uthuli, Isihluzi seFelt Bag, I-Fibreglass yeenaliti-Isihluzi seFilter yeFilter, Ingqokelela yothuli,